Siyaasadda cookie - Idaacadaha Shabakadaha
Bogga ugu weyn / Siyaasadda cookie
Si boggan looga dhigo mid si sax ah u shaqeeya, waxaan ku ridi karnaa faylal yar oo xog ah oo loo yaqaan 'cookies' qalabkaaga. Websaydhada badankood ayaa tan sameeya.
Cookie waa feyl yar oo qoraal ah oo degelku ku keydiyo kombuyuutarkaaga ama qalabkaaga moobiilka markii aad booqato goobta. Waxay u suurta gelineysaa degelka inuu xasuusto ficiladaada iyo dookhaaga (sida soo galida, luqadda, cabbirka xarfaha iyo dookhaaga kale ee muujinta) in muddo ah, sidaa darteed uma baahnid inaad dib u sii geliso iyaga mar kasta oo aad ku soo noqoto goobta ama ka daalaco hal bog ilaa bog kale.
Kukis noocee ah ayaa lagu dejiyaa booqashada boggayaga?
Marka si fudud ayaad "Like" u wadaagi kartaa ama ula wadaagi kartaa waxyaabahayaga sida Facebook iyo Twitter waxaan ku soo darnay badhanno wadaagga bartayada.
Kukiyada hagaajinta goobta
Waxaan si joogto ah u tijaabineynaa naqshadeynta cusub ama astaamaha goobta ee boggayaga. Waxaan tan ku sameynaa adigoo tusinaya noocyo kala duwan oo ka mid ah boggeena internetka dad kala duwan oo aan si qarsoodi ah ula soconno sida booqdayaasha boggeena uga jawaabaan noocyadan kala duwan. Ugu dambeyntii tani waxay naga caawineysaa inaan kuu soo bandhigno degel ka wanaagsan.
Kukiyadaha tirakoobka booqdaha
Waxaan u adeegsanaa cookies si loo soo ururiyo tirakoobka booqdayaasha sida imisa qof ay soo booqdeen degelkeena, nooca tikniyoolajiyadda ay adeegsanayaan (tusaale. Mac ama Windows oo gacan ka geysanaya in la garto goorta boggeena uusan u shaqeyneynin sida ay ugu habboon tahay tikniyoolajiyad gaar ah), intee in leeg waxay ku bixiyaan goobta, bogga ay eegaan iwm Tani waxay naga caawinaysaa inaan si joogto ah u hagaajino degelkeenna. Barnaamijyadan loogu magac daray "gorfaynta" ayaa sidoo kale noo sheegaya haddii ay sida dadku ku yimaadeen boggan (tusaale ahaan mashiinka wax raadinta) iyo inay halkaan joogeen ka hor intaanay naga caawin inay lacag badan geliyaan horumarinta adeegyadeenna adiga intii aan suuq geyn lahayn.
Kukiyada dib u soo celinta
Waxaad ogaan kartaa in mararka qaarkood booqashada ka dib aad arkayso tiro xayeysiisyo ah oo ka kordhay barta aad booqatay. Tani waa sababta oo ah xayeysiistayaasha, oo aan kujirno annaga ayaa iska bixinna xayeysiintan. Tikniyoolajiyadda tan lagu sameeyo waxaa lagu suurta galiyay buskudka sidaas darteedna waxaa laga yaabaa inaan dhigno wax loo yaqaan "cooket dib-u-soo-celinta" muddada booqashadaada. Waxaan u adeegsannaa xayeysiintan si aan u siino dalabyo gaar ah iwm si aan kuugu dhiirrigelinno inaad ku soo noqoto degelkeenna. Ha ka welwelin karti uma lihin inaan si firfircoon ula soo xiriirno maaddaama geeddi-socodka oo dhan gebi ahaanba la aqoonsan yahay. Waad ka bixi kartaa buskudyadan wakhti kasta.
Kukiyada Warqadda Emailka
Sidee loo xakameynayaa cookies?
Waad xakameyn kartaa oo / tirtiri kartaa cookies sida aad rabto - wixii faahfaahin ah, ka eeg aboutcookies.org. Waad tirtiri kartaa dhammaan cookies-ka ku jira kumbuyuutarkaaga oo waxaad dejin kartaa daalacayaasha badankood si looga hortago in la dhigo. Haddii aad tan sameyso, si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad ku qasbato inaad gacanta ku hagaajiso doorbidyada mar kasta oo aad booqato degel oo adeegyada qaarkood iyo shaqooyinka laga yaabo inaysan shaqeyn.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan Nidaamka Kukiyada, fadlan nala soo xiriir: